WatchOS 6 ayaa hadda loo heli karaa Apple Watch Series 1 iyo Series 2 | Wararka IPhone
Bishii Sebtember 19, Apple server waxay sii daayeen cusbooneysiinta watchOS 6 ee loogu talagalay Apple Watch Series 3 iyo Series 4, ka tagista labada taxane 1 iyo taxanaha 2 cusbooneysiinta, laba nooc oo la jaan qaadi kara nooca lixaad ee watchOS sida loogu dhawaaqay WWDC. Waqtiga watchOS 6 sii deynta.
Waxay qaadatay in kabadan hal bil tan iyo markii lasii daayay watchOS 6 qaybtiisii ​​ugu dambaysay ee isticmaalayaasha Taxanaha 1 iyo Taxanaha 2 inay fursad u helaan rakibida nuqulkan cusub, noocaas oo ah wuxuu si toos ah ugu yimaadaa moodelladan oo leh nooca 6.1 ee watchOS. Sababta kaliya ee daahinta daahfurka waxay noqon kartaa hagaajinta nidaamka qalliinka ee aaladaha awoodda yar.
Dib udhaca ku yimid daahfurka watchOS 6 ee taxanaha 1 iyo taxanaha 2 labadaba noqo ogeysiiska ugu horeeya ee ah in labada nooc aysan cusbooneysiin doonin qeybta xigta ee watchOS. Cusboonaysiintaan cusub looma heli karo oo keliya taxanaha 1 iyo taxanaha 2, laakiin sidoo kale waxaa loo heli karaa inta ka hartay moodellada goor dambe yimid.
Cusboonaysiinta ugu weyn ee ay watchOS 6.1 na siiso ayaa ah waafaqsanaanta AirPods Pro, sameecadaha dhagaha la ’ee Apple-ka ee cusub oo leh buuq firfircoon baajinta oo tan iyo shalay ayaa laga heli karaa websaydhka Apple 279 euro.
Cusboonaysiin kale oo ka timaada gacanta cusbooneysiintan cusub ee watchOS, waxaan ka helaynaa isticmaalka batteriga ee Apple Watch Series 5 cusub, gaar ahaan dhammaan adeegsadayaasha isticmaala shaashadda marwalba, mid ka mid ah shaqooyinka sababay madax xanuun ku dhaca dadka isticmaala ee soo iibsaday jiilkan cusub ee Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » WatchOS 6 ayaa hadda loo heli karaa Apple Watch Series 1 iyo Series 2
Saacadda gabadhayda, oo ah taxanaha 1, ma helayo cusbooneysiinta aad faallo ka bixisay, weli waxay ku jirtaa 4.3.2.
Markaa waxay noqon doontaa Taxanaha 0 ee ugu horreeya ee soo baxa. Taxanaha 1 iyo Taxanaha 2 waxay soo wada baxeen isla waqtigaas waana hadda markii lagu cusboonaysiiyay barnaamijka Daawashada.
Hagaag, gabi ahaanba waad saxantahay, waa tii iigu horeysay ee aan haysto waxaanan moodayay inay ku bilaabatay taxanaha 1…. Aad baad ugu mahadsantahay cadeynta.
Taas waxaan u nahay.
Waxaan ogaaday in habka cusbooneysiinta ee saacadda Apple uu yahay mid gaabis ah oo daal badan
Jawaab Lalo Fonseca
»Cusboonaysiintaan cusub looma heli karo oo kaliya taxanaha 1 iyo taxanaha 2, laakiin waxaa loo heli karaa dhammaan noocyada Apple Watch.»
Cillad, jiilkii ugu horreeyay wuxuu ku ekaaday watchOS4
Waxaa la fahansan yahay inaan loo heli karin Taxanaha 0, maaddaama haddii aan la cusbooneysiin daawashada 5 aan cusbooneysiinaynin watchOS.
6. Sikastaba, waxaan ka dhigay baaragaraafkaasi mid si gaar ah u qeexan.